Gabadh yar oo shan sano jirtay oo walaalkeed dartiis loo iibiyey | Biyoguurenews.com
Home Wararka Gabadh yar oo shan sano jirtay oo walaalkeed dartiis loo iibiyey
Gabadh yar oo shan sano jirtay oo walaalkeed dartiis loo iibiyey
“Xanuunka wiilkayga hayey waxa uu ahaa mid aan loo dulqaadan karin, markii aan wajigiisa eegay, waxaan ku khasbanaanay in aan lacagta qaadanno”.
Nazanin aabbaheed waa uu ka war wareegayey balse waxaan saygayga ku qanciyay in uu lacagta oggolaado oo aan gabadheenna ku baddalanno”. ayay tidhi hooyadeed oo ku nool xero qaxooti oo lagu magacaabo Shahrak e Sab zoo kutaal Galbeedka Afghanistan.
Nazanin waalidkeed waxay dhaleen toddoba caruur ah – saddex gabdhood iyo afar wiil.
Inayatulhaq Yasini oo katirsan BBC World Service ayaa ka waraystay waxa ku dhaliyey go’aanka ah in ay gabadhooda iibiyaan.iilkeenna waxaa haleelay xanuunka qallalka markii uu afar jirka ahaa mana aannan haysan lacag aan ku daawaynno” ayuu yidhi Nazanin aabbaheed.
” Waxaan qaatay lacag waxaan oggolaaday in aan bixiyo gabadha carruurtayda ugu wayn ee Nazanin si loo guursado. Waxaan lacagtii ku bixiyey daawaynta wiilkayga, balse ma uusan caafimaadin, waxaa la ii qaatay in aan gabadhayda iska haysto” ayay tidhi hooyadu.
“haddii uu jiro qof sidaas ku iibiyey ilmihiisii way iska caddahay in uu ka qoomamaynayo. Waan ka qoomamaynayaa balse waxba itarimayso” ayuu yiri aabbaha qoyskaas.
Da’da guurka ee haweenka dalka Afghanistan waa 16 jir, halka da’da guurka ee ragguna ay tahay 18 sano. Balse qaar badan ayaa ku guursada da’ intaas aad uga yar.
Marka la eego, warbixin ay soo saartay hay’dda Unicef sanadkii 2018, 35% gabdhaha reer Afghanistan waa la guursadaa isla marka ay gaadhaan da’da 18 jirka. 9% waxayba guursadaan ayagoon gaadhin 15 jir.
Dalka Bangladesh oo waayadii dambe dhaqaalihiisu soo kobcayey, 59% ayaa lagu qiyaasaa gabdhaha la guursado ee da’doodu 18 jir-ka ka hoosayso.
Balse Meherka ka sokoow, gabadha aabbaheed ama walaalkeeda reer ugu wayn waxay doonaan oo ay qaataan lacag “yarad” – taas oo ay ka qaataan qoyska ninka caruuska ah.
” Waxaanu ahayn beeraleey waxaan sidoo kale dhaqan jirnay xoogaa lo’ ah, balse wax kasta way na dhaafeen” ayuu yidhi aabbaha qoyskaas.
Xoolahoodii waxay ku baabe’een abaarta qoyskuna waxay ka hayaameen tuuladoodii kutiil gobolka Badghis ee Waqooyi Galbeed ee Afghanistan, waxayna dageen xero qaxooti oo u dhow magaalada Herat, oo kutaal xuduudda Afghanistan ay la wadaagto Iran.
“Gabadhayda Waxaan siiyey wax kasta oo aan u awooday. Lacagtii guurka ee aan qaadannay ma ahayn wax saas u sii badan” ayuu yiri aabbaha qoyskaas.
Previous articleMarkab Shidaal Usiday Shirkada Red Sea, Kuna Xanibnaa Emaaraadka Oo Lasii Daayay Iyo Siyaasi Ka Hadlay Doorkii Uu Ku Lahaa Madaxwaynaha Jsl!
Next articleWasiirka Xanaanada Xoolaha Xil Ka Qaadis Iyo Magacaabis Sameeyey